प्रधानमन्त्री ओलीको एक ट्वीटले राजनीतिक वृत्तमा तरंग, कसलाई गरे प्रहार ? « Deshko News
प्रधानमन्त्री ओलीको एक ट्वीटले राजनीतिक वृत्तमा तरंग, कसलाई गरे प्रहार ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो गरेको ट्विटले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको चर्चा भइरहेका बेला प्रधामन्त्री ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत ट्विटर ह्यान्डलबाट गरेको ट्विटले धेरै प्रश्न पनि जन्माएको छ । अन्नपूर्णमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीले समिकरण फेर्न बानी परेकाहरुलाई भन्दै ट्विटमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।
ओलीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘हामी विकास र समृद्धिको एजेण्डामा हिँडिरहेका छौँ। आफ्नो दुनो सोझ्याउन समिकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिबिम्ब सरकारका काममा देखापर्छ । किनकी सरकारले जनताबाटै कार्यदेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा थियो र छ ।’
त्यसैगरी प्रमको यो ट्विट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको सहकार्यमाथि व्यङ्ग्य हुन सक्ने पनि केहीको धारणा छ ।